Faa'iidooyinka dheriyada barnaamijka | Bezzia
Maria vazquez | 12/10/2021 12:00 | Karinta
Qalabka yaryar waxay u fududeeyaan hawlaheena maalinlaha ah dheriyada barnaamijka waa laga reebo. Sababtoo ah xawliga nolosha ee hadda jira ayaa nalagu qasbay in aan waxyaalo badan ku qabanno waqti yar gudahood waxaana dheriga barnaamijku noo oggolaan karaa in aan heshiisiino qaar ka mid ah hawlaha guriga. Laakiin waa maxay dheriga barnaamijka?
1 Waa maxay dheriga barnaamijka
1.1 Farqiga u dhexeeya mashiinka cuntada iyo dheriga digsiga
2 Faa'iidooyinka dheriga barnaamijka
Waa maxay dheriga barnaamijka
Robotyada jikada, dheriyada barnaamijka lagu kariyo, cunto kariyeyaasha gaabis ah ... ma garan karnaa waxa aan ula jeedno markaan ka hadlayno mid kasta oo ka mid ah qalabkaan yar? In kasta oo aan inta badan is -tixgelinno aaladaha jikada, isku mid maahan.
Dheriga barnaamijku waa cunto kariye cadaadis koronto. Naqshadeedu waxay la mid tahay tan shiil -qoto dheer: waxay ku leedahay dabool qaybta sare oo kuu oggolaanaysa inaad geliso maaddooyinka, waalka oo la mid ah kuwa cunto -kariye dhaqsaha dhaqsaha leh, oo nidaamkooda ay ku daydaan, iyo heerkulbeegga.
Dheriyada barnaamijka ayaa sidoo kale leh guddi hore oo ku yaal kaliya waa inaad doorataa barnaamijka la rabo. Waxay maraq, shiil, uumi, shiilan, duban ... waxayna ku ogeysiiyaan marka cuntada la dhammeeyo. Waa barnaamij la diyaarin karo, si aad u diyaarsato cuntada waqtiga aad dooratay, sida hadda la sameeyay. Ka warran haddii korontadu tagto? Welwel ma yeelan doontid: marka uu soo laabto wuxuu sii wadi doonaa halkii uu ka tagay, mahadnaqdiisa darteed.
Inta badan dheriyada barnaamijka ayaa sidoo kale leh ikhtiyaarka kuleylka iyo kululaynta, taas oo kuu oggolaanaysa inaadan wasakhaynin suxuunta badan. Waana wax iska caadi ah inay haystaan ​​badhan cad si ay u fuliyaan is-nadiifinta.
Farqiga u dhexeeya mashiinka cuntada iyo dheriga digsiga
Waa maxay farqiga u dhexeeya qalabkan iyo robot jikada? Halka dheriga barnaamijka "keligiis" wuxuu karsadaa, Robot -ka jikada wuu sii socdaa, wuxuu kaloo ka shaqaynayaa cuntada. Kuwani waa, robot -ka jikada waxaad ku jari kartaa, ku burburin kartaa cajiinka ... Oo ka waran a Dheriga karinta oo gaabis ah? Dheryaha noocaan ah waqti dheer baan ka soo hadalnay; Waxay yihiin dheriyo dhaqameed laakiin koronto ah oo lagu kariyo kulayl yar.
Kuleylka qunyar socodka ah dhammaantood waa ciil
Faa'iidooyinka dheriga barnaamijka
Ogaanshaha astaamaha ugu muhiimsan ee dheriga barnaamijka, waa sahlan tahay in la qiyaaso faa'iidooyinka ay na siiso. Haddii aad marar badan cunto kariso laakiin aadan haysan waqti badan ama aad rabto in aad wax badan ku qaadato, kuwani waa, shaki la'aan, waa ikhtiyaar wanaagsan sababaha soo socda.
Way fudud yihiin. Qof kasta ayaa awood u leh inuu isticmaalo dheriga barnaamijka. Kaliya waa inaad gashataa, gelisaa waxyaabaha ay ka kooban tahay, dooro barnaamijka karinta oo sug inta saxanku diyaar noqonayo.
Waxay yareeyaan waqtiga karinta. Waxaad u kari kartaa si la mid ah sida dheriga dhaqameedka laakiin waqti gaaban tan iyo inta uu wax ku karsado cadaadis sare. Adigoon ka warqabin, waxay si dhakhso ah u kari doontaa suxuuntaada.
Isticmaal tamar yar iyo koronto ka badan dheri caadi ah. Adigoo yareynaya kuleylka la bixiyay iyo waqtiga karinta, waxaad badbaadin kartaa ilaa 70% tamar, taas oo si togan u saamayn doonta biilka korontada.
Way nabad qabaan. Dheryadan wax lagu kariyo ee barnaamijka lagu diyaarin karo waxay leeyihiin farsamo ka dhigaysa mid aad ammaan u ah. Iska ilow gubitaannada aan la rabin iyo dhacdooyinka jikada ka dhasha cadaadiska xad -dhaafka ah awgiis. Waxay leeyihiin nidaamyo kuu digaya haddii daboolka aan si habboon loo xirin oo ay leeyihiin nidaam cadaadis la rujiyay, si looga fogaado gubasho marka daboolka la furayo. damiya marka la dhammeeyo.
Waxay kuu oggolaanayaan inaad wax walba karsato. Intooda badan waxay leeyihiin barnaamijyo cunto karis oo kala duwan: turbo, cadaadis, uumiga, fuud, ugaadhsiga, qarsoodiga, bariiska, baastada, weelka, shiil, shiil, foorno ... Sidoo kale sanduuqa waxaa ku jira buug leh fikrado badan oo ku saabsan sida loo diyaariyo menu -kaaga toddobaadlaha ah way fududahay. Fadhiiso 10 daqiiqo Axad kasta, soo hel fikrado aad ku diyaariso liiska toddobaadka oo dhan iskana ilow inaad maalin walba isweydiiso waxa aad karinayso maalinta xigta.
Miyaad u aragtaa dheriyada barnaamijka lagu diyaarin karo maalgashi wanaagsan jikadaada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Karinta » Faa'iidooyinka dheriyada barnaamijka